किन छोडिन् बर्षाले मेरो पैसा खोई निर्माण पक्ष भन्छन् फिट नहुदाँ बाहिरीयोFilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
किन छोडिन् बर्षाले मेरो पैसा खोई
निर्माण पक्ष भन्छन् फिट नहुदाँ बाहिरीयो
अभिनेत्री बर्षा शिवाकोटीले रोज रानाको होम प्राडक्शनमा बन्न लागेको चलचित्र मेरो पैसा खोइबाट हात जिकेकी छिन् । बर्षाको लागि स्कृप्ट फिट नहुने भएपछि निर्माण पक्षले निकालिएको खबर बाहिरीएको छ ।
वलिउडको चर्चित फिल्म भुतनाथ निर्देशक विवेक शर्माले निर्देशन गर्न लागेको नेपाली प्रोजेक्ट मेरो पैसा खोईबाट बर्षा बाहिरीएकी हुन् । बर्षले भने निर्माण टिमले स्कृप्ट आफुलाई नदिएको र रोल पनि परिवर्तन गरेको दावी गरेकी छिन् । तर खास कुरा अर्कै रहेको निर्माण पक्षले बताएका छन् । निर्माण पक्षले शुरुमा दुबैबर्षा अर्थात बर्षा राउत र बर्षा शिवाकोटीलाई अनुबन्ध गरेको हो । तर पछि बर्षा शिवाकोटीलाई चलचित्रको कथाले कतै पनि नछोईए पछि बाहिरीएको बताएका छन् । चलचित्र अब केही दिनमा फ्लोरमा जादैछ । बर्षाको ठाउँमा अर्कै नायिकाको खोजी भईरहेको निर्माण पक्षले बताईएको छ ।
तर निर्माता रोजले भने बर्षाको लागी तय गरिएको पात्रमा उनी फिट नभएपछि सहायकमा पनि सहायक भूमिका उनको पक्षमा देखिएपछि बर्षाले हात झिकेको दाबी गरे । उता बर्षाको तर्क भने लिड अभिनेत्री भनेर पछि सहायक पात्र थमाएको छ ।
खास कुरा के हो त, निर्माता रोजसँगको कुराकानीले उनले जवाफ फर्काए, ’मुख्य हिरोइनमा शिवाकोटी नभइ पहिले नै बर्षा राउत फाइनल थिइन्, सहायकमा आएकी शिवाकोटी उक्त पात्रमा पनि फिट नभएकोले बाहिर भएकी हुन् ।’ फिल्म फागुनबाट फ्लोरमा जाने बताइएको छ ।
यो फिल्ममा सौगात मल्ल लिड अभिनेतामा फाइनल भइसकेका छन् । त्यसो त निर्देशक शर्माले यसअघि नै कुनै पनि कलाकार तथा निर्माण टिम सदस्यलाइ स्कृप्ट नदिने र सबैकुरा फ्लोरमा मात्र खुलाउने बोलिसकेका थिए ।
दसैंका बेला सर्वाधिक बज्ने गीतहरू(भिडियोसहित)
दसैँमा घर र माइती दुवैतिर : टीका प्रसाईं
दशैं पछि कबड्डी ४ छायाँकनमा जाने
‘ब्लाइन्ड रक्स’ कै सिक्वेल बनाउँछु : निकेश लिम्बू
दर्शकसँग दसैँ मनाउँछु : सलोन बस्नेत
सगरमाथाको फेदमा बलिउड अभिनेत्री परिणिती चोपडा (फोटोफिचर)
इरफानको भूमिका विक्कीलाई
कुन कलाकारको दशैं कस्तो ?
‘राधा’मा यस्ती देखिइन् सृष्टि श्रेष्ठ
पढाइ छोडेर फिल्म : रणवीर कपुर